Dawlada Kenya oo shuruud ku xirtey wadaxaajood ay la gasho Al-Shabaab – SBC
Dawlada Kenya oo shuruud ku xirtey wadaxaajood ay la gasho Al-Shabaab
Dawlada Kenya ayaa sheegay in saraakiil ka tirsan xarakada Al-Shabaab ay maalmihii ugu dambeeyey xiriiro la soo sameynayeen masuuliyiin ka mid xukuumada Kenya.
Wasiir kuxigeenka arimaha dibada ee Kenya Richard Onyoka ayaa shir jaraa’id oo uu ku qabtey magaalada Nairobi wuxuu ku xaqiijiyey in ay had iyo goor ay la soo xiraarayeen saraakiisha Al-Shabaab dawlada Kenya iyagoo doonayey wada xaajood.
“Hadii Al-Shabaab doonayso in lala hadlo ama ay wadaxaajood doonayaan dhankeena waa mid furan, xaqiiqdu waa in Al-Shabaab ay si joogto ah ula soo xiriirayso dawlada Kenya” ayuu ku yiri shirkaasi saxaafadeed Onyoka.
Hadalkan ka soo baxa wasiirkan ka tirsan dawlada Kenya ayaa wuxuu ku soo aadaya isla markaana uu muujinayaa hadalo iska soo horjeeda ka dib markii afhayeenka dawlada Kenmya Alfred Mutua oo meesha ka saarey wax wadahadal ah oo ay la galayaan Al-Shabaab isagoo sheegay waa sida hadalka uu yiriye inaanay Kenya wax wadahadal ah la galeyn wax uu ugu yeeray koox argagixiso.
Mutua wuxuu farta ku fiiqay inaanay jirin wax qorshe ah oo Kenya ugu jira inay la xaajooto Al-Shabaab, kuwaasi oo wacad ku marey in Kenya ay dab ka shidi doonaan isla markaana dhulka soo dhigi doonaan saraha dhaadheer ee Nairobi.
Laakiin Richard Onyoka wasiir ku xigeenka arimaha dibada Kenya wuxuu sheegay in Kenya ay wadahadal la galayso Al-Shabaab hadii ay joojiyaan sida uu hadalka uu u dhigay colaada isla markaana la abuuro jawi wadahadalo oo ku saleysan heshiiskii Jibuuti 2010 iyo cahdiga Kampala.
“Hadii ay doonayn iyagu (Shabaab) in ay colaada joojiyaan, dawlada Kenya wax wadaxaajood ah lama galeyso, waynu ognahay in kuwa ka mid ah Al-Shabaab ay joogaan halkan (Kenya), waana wax lidi ku ah dawlada inay halkan sii joogaan, waayo iyaga ayaanba la dagaalsanahay” ayuu hadalkiisa sii raaciyey Richard Onyoka.
dowlada kenya ma ahan in ay tiraahdo waxan la heshinayna al shabab. Wayo alsabab mataqa he shiis waa in lala dagaalama alshshb .